Ụdị Àgwà Àgwà Maka Ụmụ Nwaanyị - Atụmatụ Echiche Tattoos
Ụdị Uche Azụ Ụmụaka
1. Ogbugbu egbu egbu na azụ na-acha uhie uhie na-acha odo odo onk imewe na-eweta mma anya
Women n'anya na-egbuke egbuke na azụ ha na-acha odo odo na-acha odo odo imechi imewe ka ha anya mara mma na mara
2. Ogbugbu egbu osisi na-acha uhie uhie na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-eme ka nwa agbọghọ mara mma.
Ụmụ agbọghọ na-ahụ mmasị na-acha akwụkwọ ndụ pink na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-egosi na ha na-egbu egbu egbu n'ubu ha iji mee ka ha yie ihe mara mma
3. Ifuru egbu egbu na ogwe aka na-enye anya n 'ụmụ agbọghọ
Ụmụ agbọghọ, na-eji uwe na-acha aka na-akacha aka ga-aga maka egbugbu ifuru na ogwe aka ha iji mee ka ọha na eze mara ihe ha dọtara n'agha.
4. Ogbugbu a na-egbu egbu na nwa agbọghọ ahụ na-enye ya ihe dị egwu
Ụmụ agbọghọ ndị nwere akpụkpọ anụ ga-aga maka nhazi a nke aka ha. Nke a na-enye ha ihe ama ama ama
5. Ihe nkedo ink nke pink nke egbu egbu na azụ, mee ka ụmụ agbọghọ nwee anya dị mma
Ụmụ nwanyị na akpụkpọ anụ peach ga-aga maka imepụta ink pink nke nke ifuru egbu egbu na azụ ime ka ha nwee anya mara mma
6. Ogbugbu egbu egbu na azụ na-eme ka ndị inyom nwee ọmarịcha ọdịdị
Ụmụ nwanyị na-enwe mmasị na-egbu egbu egbugbu na azụ ha. Nke a na-enye ọhụụ ahụ
7. Ogbugbu a na-egbu egbu nwa agbọghọ ahụ n'azụ azụ na-enye ya anya dị egwu
Ụmụ agbọghọ ndị nwere akpụkpọ anụ ga-aga maka ebumpụtaa a nke egbu egbu na-acha odo odo na-acha odo odo na-acha odo odo na azụ ha azụ. Nke a na-eme ka ha mara mma
8. Ogbugbu ifuru na-achacha acha odo odo na-acha odo odo na-eme ka ụmụ agbọghọ nwee anya dị ebube
Ụmụ agbọghọ na-agbapụ agbapụ na-achọ ka a na-egbu egbu egbu na azụ ha. Nke a na-enye ha anya dị ebube
6. Ogbugbu egbu egbu n'olu na-eweta anya nwanyi
Ụmụ agbọghọ dị ka akara mma ifuru na-acha odo odo ink na n'olu. Ntucha egbu egbu a na-ele anya nwanyi.
10. Ogbugbu egbu egbu na-eji ejiji-acha odo odo eme ka otu nwa agbọghọ mara mma
Ụmụ agbọghọ ga-enwe mmasị na-egbu egbu egbu na-acha odo odo; egbu egbu egbu a na-eme ka ha maa mma
11. Ogbugbu egbu osisi na-achacha acha odo odo na odo odo na-eme ka nwa agbọghọ mara mma
Nwa agbọghọ na-enwe mmasị inwe ifuru Ụdị na-agbatịkwu mkpịsị nkịkị. Nke a na-enye anya dị mma
12. Ụdị Akpụkpọ anụ maka ndị ikom na-eji ncha ink nke pink mee ka ha dị ka ndị nzuzu
Ndị mmadụ na-aga maka akara mkpụrụ osisi na-acha odo odo na-eme ka ha yie ihe nzuzu
13. Ọmarịcha okooko osisi dị n'akụkụ abụọ nke igbu egbu egbu maka ụmụ agbọghọ
Tags:na-adọ aka mma
ọdụm ọdụmndị na-egbuke egbukeọnwa tattoosegbu egbuna-egbu egbun'olu oluakara ntụpọụkwụ akaegbu egbu maka ụmụ nwokemma tattoosegbu egbu okpuegwu egwuaka akaokpueze okpuezeenyi kacha mma enyikoi ika tattooUche obiegbugbu egbugbuudara okooko osisiazụ azụrip tattoosngwusi pusiNtuba ntughariegbu egbu hennaagbụrụ eboegbu egbu ebighi ebiakwara obiegbu egbu diamondmehndi imeweakpị akpịegbu egbu osisi lotusụmụnne mgbuegbu egbu mmiriGeometric Tattoosarịlịka arịlịkaenyí egbu egbuỤdị ekpomkpannụnụaka akaegbu egbu egbuaka mma akandị mmụọ ozina-adọ aka mmaechiche egbugbuegbugbu maka ụmụ agbọghọdi na nwunyeAnkle TattoosEgwu ugozodiac akara akaraima ima mma